Fariimo jaceyl : macaanka oo dhan Jaceylkaaga ayaa ugu macaan……. | alcarabiya.com
Home » Fariimo Jaceyl » Fariimo jaceyl : macaanka oo dhan Jaceylkaaga ayaa ugu macaan…….
Fariimo jaceyl : macaanka oo dhan Jaceylkaaga ayaa ugu macaan…….
Jaceylku waa macaan balse waxaa kasii macaan badan kan dhabta ah laakiin taa waxa uga sii macaan marki aad lajoogtid jaceylkaaga.
Waqtigu markasta wuu tagaa, hase ahaatee jaceylkeenu manoqonayo mid dhinta, Buur kasto waxaan u koraa adiga daraadaa. Bada weyntaana waa jaraa sidookale. Si aan u arko farxadaada waana soconayaa hal mile aan kugu helayo.	Madaneeyo waxayaabaha ay dadku leeyihiin ,waxa aan rabaa in aan in badan badan ku arko maalin kasto.
7 Responses to Fariimo jaceyl : macaanka oo dhan Jaceylkaaga ayaa ugu macaan…….	shafici Reply
August 7, 2013 at 8:55 am	Jeceel waa jiraa jeceellaana waa nabadlaan
February 17, 2013 at 4:38 pm	waa run jaceylka inta badan wa macaan lkn qaraarna kama marno
Man top: Reply
February 10, 2013 at 12:38 pm	Wariyaha mustaqbalka dhow: No more man No Cry
February 4, 2013 at 8:48 am	Waa run jecelka waa macan lkn sido kale warar sida kan aniga ihaya okale qeybtisi hore malab wa igamacaned lkn qeybtisan danbe wexey igala qarar badantahay sibir. Wana jecelku midka ihorseday xalada an hadda kusuganahay ee kudhisan murugta iyo tiranyada an kala go’a lehen taso sashatay qalbigeyga iguna rebtay urugo xanun badan
February 3, 2013 at 10:14 am	Ninyahow mid ogow naagtada markaad dhuuso ka keentid un bey dhabantahay inta ka horeesa gus baad tusisay kuma aysan qancin ee ragow dumarka si wacan ugu raaxeeya oo qanciya
February 2, 2013 at 3:47 pm	Farimo jcl xusus goniya qalbi safiya waliba daren jogto ah ayan idinku salamaya sln ka dib wa run mcn o dhan jclkaga ugu mcn because jclkaga farxad iyo murugaba wa la qebsan karta asagana mcn wax walbo kaga dhigi karo asagana xarar kaga dhigi karo mahadsanidiin user addrs nasricade_83@nimbuz and samir-nasri42 gabadh danenaysa jcl o la socoto farxad iyo damashad
February 2, 2013 at 2:26 pm	Naagaha intooda badan wey ka sheekeyan ragooda hada kahor 3 dumar ah ayaa sheekadooda dhagees, (1) waxay tiri aniga nin keyga biyaha wuu daahiyaa 45 minit kama yimaadan (2) waxay tiri nin keyga wuu gus weyn’yahay marki aan isku tagno mandhicirka i xanuuna, (3) nin keyga wuu gus yar yahay lakin wuu niiko badan yahay, (4) waxay tiri aniga mid weyn iyo mid yar iyo niiko badan intaba mahayo,FG: naagaha waa cadow qof u roon & mid u daran midna ma yaqaanaan